ADO.NET in C# (part 2) | our notes for our youngers
Filed under: ADO in Window Application — Tags: .NET, ADO.NET, C#, DataBase, programming — sevenlamp @ 9:42 AM
ကဲ မနေ့က ကျွန်တော်တို့ categoryDataSet ဆောက်ခဲ့ပြီးပြီဆိုတော့ အခုကျွန်တော်တို့ datagrid မှာ ပြဖို့ လုပ်ရအောင်။ အရင်ဆုံး window form တစ်ခုယူလိုက်ပါ၊ နာမည်ကိုတော့ CategoryList လို့ ပေးလိုက်ပါ။ အဲ့ဒီ form ထဲကို ပုံမှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း label တစ်ခု၊ button တစ်ခုနဲ့ datagrid တစ်ခုထည့်လိုက်ပါဦး။ control တွေမှာ ပြင်ရမယ့် property setting ကိုလည်း ပြထားပါတယ်။
Datagrid ကို click နှိပ်လိုက်ရင် ညာဖက်အပေါ်ဒေါင့်မှာ arrow icon လေးတစ်ခုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒါလေးကို နှိပ်လိုက်ရင် datasource ရွေးဖို့ combobox လေးကိုတွေ့မှာပါ။ အဲ့ဒီ combobox လေးကို နှိပ်ပြီး ဒီ form လေးမှာ ရှိနေတဲ့ datasource တွေကိုရွေးလို့ရပါတယ်။ အခုကျွန်တော်တို့က datasource မထည့်ရသေးလို့ ဘာမှ တွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ datasource တစ်ခု create လုပ်ဖို့နည်းလမ်း ၂ခုရှိပါတယ်။ နည်းလမ်း (၁) က အောက်က ပုံ (၂) မှာ ပြထားသလို combobox ထဲမှာ အဆင့်ဆင့်သွားပြီး ကျွန်တော်တို့ ဆောက်ထားတဲ့ CategoryDataSet ထဲက category table လေးကို ရွေးပေးလိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် ပုံ (၃) မှာ ပြထားသလို categoryBindingSource object, categoryDataSet object နဲ့ categoryTableAdapter တို့ကို ဆောက်ပေးသွားပါလိမ့်မယ်။ datagrid မှာလည်း category table ထဲက column တွေ ပေါ်လာတာ တွေ့ရမှာပါ။ ဒါဆိုရင် datagrid နဲ့ dataset ချိတ်တဲ့ အပိုင်းပြီးသွားပါပြီ။ အခု ဒီ program လေးကို run လိုက်ရင် data တွေပေါ်လာပြီလား။ မပေါ်ဘူးနော်… ဘယ်ပေါ်မလဲ category table ထဲမှာ data မှ မရှိတာကိုး 😀
ပုံ (၄) မှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း ကျွန်တော် category ၂ကြောင်းဖြည့်လိုက်ပါတယ်။ categoryID က -1 နဲ့ -2 ဆိုပြီး temporary assign လုပ်ပေးသွားပါတယ်။ update button ကို နှိပ်ပြီး update လုပ်လိုက်ပြီးတဲ့ အချိန်မှာတော့ ပုံ(၅) အတိုင်း ဖြစ်သွားမှာပါ။ categoryID က database ထဲကအတိုင်း refresh ဖြစ်သွားပါတယ်။ program ကို ပိတ်ပြီး ပြန်ဖွင့်တဲ့ အခါမှာလည်း ဒီအတိုင်းပဲ ပေါ်နေပါလိမ့်မယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ form_load event မှာ ရေးထားတဲ့ ဒီ code ကြောင့်ပါ။
How to populate data in text box by using combo box.Says, Chose ID in Combo Box, then Name, Add, City, Contact no and etc will be shown in respective text box control. If you have time, please show me.
Comment by Ko Thet — October 22, 2009 @ 8:21 PM